भारतका दोस्रा धनी राधाकृष्णको रोचक कथा - Aarthiknews
भारतका दोस्रा धनी राधाकृष्णको रोचक कथा
एजेन्सी । भारतका सर्वाधिक धनी व्यक्ति मुकेश अम्बानी हुन् भन्ने धेरैलाई थाहा छ । तर, दोस्रो धनी को होला ? यसको जवाफमा कसैले भन्छन्, टाटा समूह त कोही भ अनुमान लगाउँछन्, बरिला समूह । कतिपयले अदानीको पनि नाम लिन्छन् ।
तर, वास्तवमा त्यो ताज अर्कै एक जना व्यतिको नाममा सुरक्षित छ, त्यो नाम हो- राधाकृष्ण दमानी । यो त्यस्तो एक नाम हो, जसको सफलताको कथा आज भारतभर चर्चामा छ। त्यसैले धेरैलाई चासो छ, आखिर को हुन्, राधाकृष्ण दमानी। उनको सफलता सूत्र के हो?
राधाकृष्ण दमानी ती व्यक्ति हुन् जसले मात्र दुई वर्ष पहिले ठुलो जोखिम उठाए र त्यसपछि उनले कहिल्यै पछि फर्केर हेरेनन्।
कति छ राधाकृष्णको सम्पत्ति
शेयर बजारका अनुभवी र डी-मार्ट नामको खुद्रा पसलको चेन चलाउने कम्पनी एवेन्यू सुपर मार्केटका संस्थापक राधाकृष्ण दमानीको कुल सम्पत्ति १७.५ अर्व डलर पुगेको छ। यससँगै, राधाकृष्ण दमानी देशको दोस्रो सबैभन्दा धनी व्यक्ति बनेका छन्। पहिलो नम्बर मुकेश अंबानीको नाममा छ, जसको कुल सम्पत्ति ५७.४ अर्व डलर हो।
राधाकृष्ण दमानी देशको एक खुद्रा राजा मानिन्छ। तर विज्ञहरू भन्छन् कि दमानी ठुला निर्णयहरू गर्न र जोखिम लिनमा दक्ष छन् । पछिल्ला दुई दशकको यात्रा भन्छ कि दमानीले जोखिम उठाए र आफ्नो भाग्य परिवर्तन गरे। त्यसैले आज सबै राधाकृष्ण दमानीको सफलताका चालहरू सिक्न चाहन्छन्।
राधाकृष्ण दमानीको सम्पत्ति बढ्दै जाँदा एभिन्यू सुपरमार्ट्सका लगानीकर्ता पनि दङ्ग छन् । किनकि राधाकृष्ण दमानीले आम लगानीकर्ताको भाग्य पनि परिवर्तन गरेको छन् । एभिन्यू सुपरमार्ट्स त्यो कम्पनी हो जसले डी-मार्ट भन्ने खुद्रा चेन चलाउँछ।
राधाकृष्ण दमानीको कम्पनी एवेन्यू सुपर मार्केट २१ मार्च २०१७ मा शेयर बजारमा सूचीबद्ध गरिएको थियो । त्यस समयमा कम्पनीको कुल पुँजी करिब ३९ हजार करोड भारतीय रुपयाँ थियो। शेयर बजारमा ६२४ रुपयाँ भारु प्रति सेयर मूल्यमा यो सूचीबद्ध भएको थियो। आइपिओ जारी हुँदा ४० हजार करोडको पुँजी रहेको यो कम्पनीले एक वर्षमा ५३ हजार करोड नाफा गर्‍यो र यसको सम्पत्ति ९३ हजार करोड पुग्यो ।
लगानीकर्ता पनि मालामाल
मार्च २०१७ मा डी-मार्टको आइपिओ जारी भयो । त्यो बेला प्रति शेयर २९९ रुपयाँका दरले शेयर निष्कासन गरिएको थियो । लगानीकर्ताले कम्तीमा ५० शेयर खरिद गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसको मूल्य १४ हजार ९५० रुपयाँ हुन्थ्यो । आज त्यो ५० कित्ता शेयरको बजार मूल्य १ लाख १७ हजार ३ सय रुपयाँ छ । यसरी उनले लगानीकर्तालाई समेत सजिलै धनी बनाएका छन् ।
यो कम्पनीमा उनको परिवारको ८० प्रतिशत शेयर रहेको छ । यसका २०० वटा पसलहरू सञ्चालनमा छन् । दमानीले डी-मार्टलाई भारतमा सफल सुपर मार्केट चेन बनाएका छन् । बितेको एक वर्षमा एभिन्यू सुपर मार्केटको सेयर ३० गुणा भन्दा बढिले बढेको छ। डी मार्टले उत्पादनहरूमा छुट प्रस्ताव गरेर ग्राहकहरूलाई तान्ने नीति अपनाएको छ।
शेयर बजारमा सफल
राधाकृष्ण दमानीले १९८० को दशकमा शेयर बजारमा डेब्यू गरेका थिए । उसले शेयर बजारमा लगानीकर्ताको रूपमा आफ्नो क्यारियर सुरु गरे। आज दमानी एक सफल लगानीकर्ता बनेका छन् । दमानीले भारत सिमेन्ट, इन्डस्ट्रीज, ब्लूडार्ट, सिनेप्लेक्स कम्पनी र केही सुर्तीजन्य कम्पनीहरूमा लगानी गरेका छन्।
बुबा पनि एक सफल लगानीकर्ता थिए
राधाकृष्ण दमानीका बुबा पनि सेयर ब्रोकर थिए। यस कारणले गर्दा, उसले बाल्यावस्थादेखि नै शेयर बजारको बारेमा जान्ने अवसर पाए । बुबाको निधनपछि राधाकृष्ण दमानीले आफ्नो भाइसँग शेयर बजार कारोबार सुरु गरे। उनले राम्रो अवसरहरूको खोजी गरेर साना कम्पनीहरूमा लगानी गर्न थाले। यस बाहेक, दमानी परिवारले शुरुआती दिनमा बल-ब्यायरिंग व्यवसाय पनि सुरु गर्‍यो। तर घाटा लागेपछि त्यो रोकियो।
वास्तवमा १९९० सम्ममा राधाकृष्ण दमानीले शेयर बजारबाट करोड कमाइसकेका थिए। त्यसपछि उसले खुद्रा व्यापारमा प्रवेश गर्ने निर्णय गरे र बिस्तारै उसको व्यवसाय चालू हुन थाल्यो। दमानीले १९९९ मा खुद्रा व्यापार सुरु गरे । यो व्यापारमा फ्युचर ग्रुपका कुमार मंगलम बिर्ला र किशोर बियानी प्रवेश गरेनन्। खाद्यान्न र किराना विक्रेता डी-मार्ट भारतमा एक उच्च मुनाफा आर्जन गर्ने कम्पनी हो।
चमकधमकबाट टाढा दमानी परिवार
राधाकृष्ण दमानी जहिले पनि सेतो लुगा लगाउँदछन्, त्यसैले 'मिस्टर व्हाइट एण्ड व्हाइट' नामले शेयर बजारका लगानीकर्ताहरूमा प्रख्यात छन् । राधाकृष्ण दमानी मिडिया र मार्केटिङ गतिविधिबाट टाढा रहन्छन्। नजिकका मानिसहरूलाई थाहा छ कि राधाकृष्ण दमानी चुपचाप आफ्नो काम गर्न रुचाउँछन्।